दृष्टिकोण – News Of Nepal
सोमवार, जेष्ठ ९, २०७९ मा प्रकाशित
मिलन तिमिल्सिना/उज्यालो पालिका चुनावको नतिजा अन्तिम चरणमा पुग्दा कांग्रेस र माओवादी मसक्क मस्किएका छन् भने एमाले र एकीकृत समाजवादी झसक्कै झस्किएका छन् । गठबन्धनकै कारण कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले सोचेभन्दा राम्रो परिणाम ल्याएको छ । दुवै पार्टीका एकथरी नेताहरु उत्साहित छन् । फुटेकै कारण घाटा..
सोमवार, बैशाख २६, २०७९ मा प्रकाशित
आउँदो शुक्रवार हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि नेकपा एमालेले बेनी नगरपालिकाको प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गरेको छ । आसन्न निर्वाचनमा एमालेका उम्मेदवारहरु विजयी भएपछि आगामी पाँचवर्षे कार्यकालको अवधिमा गर्न सकिने विभिन्न योजनाहरु समावेश गरेर प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गरेको एमालेले जनाएको छ..
उमेश चौहान आधा शताब्दीसम्मका राजनीतिक सहयोद्धा माधव नेपालको नाम ‘झुक्किएर’ मुखबाट निस्किनासाथ एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली कुल्ला गर्न गएका मौकामा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाकी पत्नी आरजु राणाले उधुम मच्चाएका छन् । चुनाव त देशका दुई करोड..
यौन दुर्व्यवहारबाट कसरी जोगिने
दीपक भट्टराई प्रिय भाइबहिनीहरू, कुनै पनि अवस्थामा १८ वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकालाई डराइ, धम्क्यााइ ललाइफकाइ वा कुनै प्रलोभनमा पारेर यौन जन्य गतिविधि वा यौन सम्पर्क गर्ने कार्यलाई बाल यौन दुव्र्यवहार भनिन्छ । हाल यस्ता घटना विद्यालयस्तरमै बढी घट्न थालेको समाचार हामीले सुन्ने देख्ने गरेको छौ ।..
दुःख लुकाएर खुसी दिने आमा
शनिबार, बैशाख १७, २०७९ मा प्रकाशित
आमा जगत्कै परम पवित्र शब्द हो । संसारमा सबैभन्दा सजिलो र अनमोल शब्द हो– आमा । आमा जननी, धरतीजस्ता पर्यायवाची शब्द हुँदाहुँदै पनि शब्दकोशमा यसको परिभाषा एउटै छ । आमा आफैँमा निर्मल निस्वार्थ माया मात्र नभई घाम हुँदा चाहिने छाया पनि हुन् । आमा शिक्षाको पहिलो हरफ, चेतनाको पहिलो ज्योति र साक्षरताकी..
भान्सेकै नियन्त्रणमा छैन भान्सा
भान्साको सर्वेसर्वा बुहारी हुन्। तर, उनको इच्छाको खाना पाक्दैन। घरमूलीलाई जे मनपर्छ, त्यही पकाउनुपर्ने बाध्यता हुनु अदृश्य पितृसत्ताको प्रभाव त होइन? औसत नेपाली महिलाको दैनिकी के हुन्छ भन्ने देखिरहेकै छौं। एउटी गृहिणी बिहान सबेरै उठेर भान्सामा पस्छिन्। चिया, खाजा तयार पार्छिन्। खाना बनाएर..
गठबन्धनले यसरी ल्यायो महाअभियोग प्रस्ताव
गठबन्धनलाई कमजोर पार्न षडयन्त्र भइरहेको भन्दै दाहाल र नेपालको जोडबलमा प्रधानन्यायाधीशविरुद्व महाअभियोगको प्रस्ताव आएको हो । प्रधानमन्त्री देउवाले त्यसका लागि एमसीसी संसद्‌बाट अनुमोदन गराउन दाहाल र नेपालको साथ खोजेका छन् । संसद्‌बाट एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विवादमा..
के उनी नागरिक हैनिन् त ?
बुधबार, माघ २६, २०७८ मा प्रकाशित
सरिता पौडेल धेरै स्थानहरुमा वेवारीसे बालबालिकाहरु हामीले देखेकै हुन्छौं तर तीनीहरुको अवस्थाको बारेमा सोच्न भन्दा पनि हेयको दृष्टिले हेर्ने बानी हुन्छ प्रायमा । निकै न्युन मात्रामा उनीहरुको बारेमा र उनीहरुको पछाडीको पाटो खोज्ने गर्दछौं हामी । मानिसको मुहार हेरेर विष्लेषण गरीयो भने अन्याय पनि हुन..
अनलाइनबाट बच्चा पाऔँ, देशको जनसङ्ख्या बढाऔँ !
एक हप्ता अघिसम्म नेपालको जनसङ्ख्या तीन करोड छ भन्थे त, हैन एकाएक कसरी घटेछ हँ कान्छा ? भए जति मान्छे गनेनन् होला नि साइँला दाइ । किन गन्दैन थिए र ? घरघरमै पुगेका थिए । गाईबाख्राको त हरहिसाब खोज्दै थिए, मान्छे त झन् किन नगनेका होलान् र ? मान्छे मरेका मर्यै छन् । कहिले द्वन्द्व, कहिले दुर्घटना, कहिले..
डा. सुरेश आचार्य संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका के हो ? कस्तो रहनुपर्छ ? प्रतिपक्ष यतिबेला के गरिरहेको छ ? आम नागरिकलाई थाहा छ, दुईतिहाइ बहुमतको सरकार केपी ओलीले टिकाउन सक्नुभएन । आफ्नै पार्टी नेताहरूबीच सहकार्य र समन्वय गर्न नसक्दा उहाँको सरकार अन्ततः ढल्यो । ओली नेतृत्वको पार्टी नेकपा एमाले..